Matongerwo eNyika, 01 Chivabvu 2018
Chipiri 1 Chivabvu 2018
Chivabvu 01, 2018
Vanhu Voshora Zanu PF Zvichitevera Kushandisa Zvinhu zveHurumende Musarudzo Dzayo
Sarudzo dzemuZanu PF dzange dziri kuritirwa muzvikoro, nzvimbo dzakaita semakambani ehurumende akaita seDistrict Development Fund nedzimwe uye mapurisa ndiwo ange achivhotesa kana kutakura mapepa ekuvhotesa pamwe nekuachengetedza.
Vashandi Vokurudzirwa neZCTU Kusavhotera Zanu PF Musarudzo
Vachitaura pamhemberereo chekucheredzwa kwezuva revashandi pasi rose idzo dzaitirwa munhandare reDzivarasekwa muHarare, mutungamiri weZCTU, VaPeter Mutasa, vati vashandi munyika dzakawanda havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende dzavo kusanganisirawo vashandi vemuZimbabwe.
Pfuti Dzorira kuChegutu Musarudzo dzeZanu PF
Kwaita mhirizhonga nekuridzwa kwepfuti pedyo nekiriniki yeChinengundu muChegutu apo vatsigiri venhengo dzebato reZanu PF dziri kukwikwidza musarudzo dzanga dzichitatsurana.
Zanu-PF Yopomerwa Mhosva Yekushandisa Zvisizvo Zvikopo Kopo zveHurumende muSarudzo Dzayo
Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rashora zvikuru nyaya yekushandisa midziyo yehurumende yakaita sezvikopo kopo inonzi iri kuitwa neZanu-PF musarudzo dzayo dzemaprimary elections.
Vakakunda muSarudzo dzeZanu PF Votopembera kuMasvingo
Kunyange hazvo kuziviswa kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzakaitwa sarudzo neSvondo kwanonoka, vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura nhasi vaswera votopemberera vachimiririra kuti vazoshevedzerwa zviri pamutemo.
Sarudzo dzeZanu PF muHarare Dzotarisirwa Kupera neChitatu.
Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZanu PF muHarare, idzo dzakatanga zvisina kurongeka neSvondo, dzave kutarisirwa kupera neChipiri.
Zanu-PF Yokundikana Kupedza Sarudzo dzemaPrimary
Sarudzo dzemaprimary elections dzeZanu-PF dziri kutarisirwa kuenderera mberi nhasi mushure mekutadza kupera nezuro sezvange zvakatarisirwa. Nzvimbo dzakawanda dzakanonoka kuwana mapepa ekuvhotesa.
VaShumba, avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai waVaMugabe, Amai Grace Mugabe, vevamwe vakaita saVaJonathan Moyo naVaSaviour Kasukuwere, vaudza Studio7 bato ravo reUDA rakavambwa muna Zvita gore rapfuura
Vanhu Vakawanda Vanoungana kwaSeke Vachinzwa VaChamisa Vachitaura
Zanu PF Yoita Sarudzo Dzayo neSvondo Dzichabuda neVachamirira Bato Musarudzo
Gadziriro yesarudzo idzi yanga isina kumira zvakanaka mubato iri sezvo panga paine makakatanwa anotyisa.
Zimbabwe Yobvumidza Kurimwa kweMbanje Zviri paMutemo
Zimbabwe inyika yechipiri mudunhu reAfrica kubvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo mushure meLesotho.